Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Tuesday, March 09, 2010 Tuesday, March 09, 2010 Labels: ရသစာစုများ
ကျွန်တော့်အဖေဟာ အရမ်းကို အလုပ်ကြိုးစားတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ.. သူဟာ ပေါင်မုန့်တွေကို အိမ်တွေမှာ လိုက်ဖြန့်ရတဲ့ အရောင်းကိုယ်စားလှယ် အလုပ်ကိုလုပ်ပြီး အမေနဲ့ ကျွန်တော်တို့မောင်နှမ ၃ယောက်ကို ကျွေးမွေးလာခဲ့တာပါ.. နေ့စဉ် အလုပ်ကနေ ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်လို့ ပြန်လာပြီးတဲ့ ညနေတိုင်းမှာလဲ ဒီပလိုမာတစ်ခု ရဖို့အတွက် အတန်းတက်ပါတယ်.. အဖေ့ရည်ရွယ်ချက်က အခုထက်ကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကို ရပြီး ဒီထက် လစာလဲ ကောင်းကောင်းရဖို့ ဖြစ်ပါတယ်.. တနင်္ဂနွေ တစ်ရက်ကလွဲလို့ ကျွန်တော်တို့မှာ အဖေနဲ့အတူ ထမင်းလက်ဆုံ စားရတယ်ဆိုတာ မရှိသလောက်ပါဘဲ… အဖေ ပင်ပင်ပန်းပန်း အလုပ်ကြိုးစားတာ၊ အပင်ပန်းခံပြီး အတန်း တက်နေတာတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ မိသားစုကို အဆင့်မြင့်မြင့် ထားလိုတဲ့ စိတ်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်..
ကျွန်တော်တို့က အဖေ့ကို မိသားစုအတွက် အချိန်မပေးဘူး၊ အလုပ်ကိုဘဲ ဦးစားပေးလွန်းတယ် လို့ ၀ိုင်းပြောကြရင် အဖေက သူအလုပ်လုပ်နေတာ၊ ပညာ ဆက်သင်နေတာတွေဟာ မိသားစုအတွက်လို့ အဖြေပေးတတ်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ အဖေ့ရင်ထဲမှာလဲ မိသားစုနဲ့အတူတူ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်း အချိန်လေးပေးပြီး နေချင်တဲ့ဆန္ဒတော့ ရှိနေတာပါဘဲ..
အဖေတက်နေတဲ့ ဒီပလိုမာသင်တန်း ရဲ့အောင်စာရင်းထွက်တဲ့နေ့ ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ အဖေ့အတွက် ၀မ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စရာပါဘဲ.. ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ရလဒ်အတိုင်း အဖေဟာ ဂုဏ်ထူးနဲ့ ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်ပါတယ် အောင်စာရင်းထွက်ပြီး မကြာခင်မှာ အကြီးတန်း ကြီးကြပ်ရေးမှူး ရာထူးနဲ့အတူ ထိုက်သင့် ကောင်းမွန်တဲ့ လစာငွေကို ရရှိလာပါပြီ.. ခုတော့လည်း အဖေရဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက် တစ်ချို့က တကယ်ကို မှန်ကန်လာပါပြီ မိသားစုကို ယခင်ကထက် စာရင် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ကျွေးမွေးထားနိုင်ပါပြီ.. ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာ ဇိမ်ခံ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းလေးတွေ၊ အ၀တ်အစား ကောင်းလေးတွေ အစားအသောက် ကောင်းတွေ ၀ယ်ယူ သုံးစွဲလာနိုင်ပါပြီ..
ဒါပေမဲ့လည်း မိသားစုတွင်းမှာတော့ အဖေနဲ့ အတူတူ နေခွင့်ရချိန်က မရှိသလောက်ကို နည်းပါးလာနေပါပြီ… အဖေဟာ အလုပ်ကို အားသွန်ခွန်စိုက်နဲ့ ယခင်ထက် ကြိုးစားပြီး လုပ်ပါတယ်... ခုအလုပ်မှာ ရာထူးမြန်မြန်တက်ပြီး မန်နေဂျာ တစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ ရည်ရွယ်ချက် ထားရှိပြန်ပါတယ်.. ဒီရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်လဲ အကောင်းဆုံး စံပြ အလုပ်လုပ်သူ ဖြစ်အောင် အဖေက ကြိုးစားနေသလို တစ်ဘက်ကလည်း တက္ကသိုလ် တစ်ခုမှာ ကျောင်းတက်ဖို့လဲ စာရင်း ပေးသွင်းထားပြန်ပါတယ်.. ဒီတစ်ကြိမ်လဲ မိသားစုအတွက်လည်း အချိန်ပေးဖို့ အမေနဲ့ ကျွန်တော်တို့က အဖေ့ကို ၀ိုင်းပြောကြတဲ့အခါ မိသားစုအတွက် အပင်ပန်းခံပြီး အလုပ်လုပ်နေတာ၊ ပညာသင်နေတာလို့ဘဲ ပြန်ပြောပြန်ပါတယ်.. ဘာဘဲပြောပြော ဖေဖေ့ရင်ထဲမှာတော့ မိသားစုနဲ့ အချိန်လေးပေးပြီး နေချင်တဲ့ဆန္ဒကတော့ ရှိနေပါတယ်..
အဖေရည်ရွယ်ထားတဲ့ အတိုင်းပါဘဲ.. များမကြာခင်မှာ မန်နေဂျာအဖြစ် ရာထူးတိုးပြီး လစာငွေလည်း ပိုများလာပါပြီ.. ဖေဖေဟာ မေမေ့အိမ် အလုပ်တွေကို ကူညီဖို့အတွက် ကူဖော်လောင်ဖက် မိန်းခလေး တစ်ယောက် ငှားပေးပါတယ်.. အခုလက်ရှိနေတဲ့ အိပ်ခန်း၃ခန်းပါ တိုက်ခန်းကိုလဲ မိသားစုအတွက် လုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့ သူက ထင်လာပါတယ်.. ဒါကြောင့် ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းကျယ်ကြီးတစ်ခုကို မိသားစုအတွက် ၀ယ်ယူပေးချင်တဲ့ ဆန္ဒတစ်ခု ပြင်းပြစွာ ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်.. ဒါနဲ့ဘဲ အလုပ်ကို သူများတကာထက် မနားမနေ ကြိုးစား လုပ်ပါတယ်.. တနင်္ဂနွေလို နေ့မျိုးမှာတောင် ဖေဖေက အနားမယူဘဲ အလုပ်လုပ်လေ့ ရှိပါတယ်.. ဒါကြောင့်လဲ ကျွန်တော်တို့မှာ ဖေဖေ့ကို မြင်တွေ့ရချိန် နည်းသထက် နည်းလာပါတယ်… ပင်ပန်းလွန်းတဲ့ အဖေ့ကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော်တို့က အဖေ့ကို နားနားနေနေ အလုပ်လုပ်ဖို့နဲ့ မိသားစုနဲ့အတူ ပျော်ပျော်ပါးပါးနေဖို့ တောင်းဆိုတိုင်းလည်း မိသားစုရှေ့ရေးအတွက် ကြိုးစားနေတာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြီး ထုံစံအတိုင်း ဖေဖေက အလုပ်ကိုသာ ဦးစားပေးပါတယ်..
ဒီလိုနဲ့ တက္ကသိုလ်ကနေလဲ ဘွဲ့တွေထပ်ရလာတဲ့ ဖေဖေဟာ ရာထူးတွေ အဆင့်ဆင့် တက်လာပြီး လစာတွေလဲ များသထက် များလာပါတယ်.. အဖေဖြစ်စေချင်ခဲ့သလိုဘဲ ကျွန်တော်တို့ တစ်မိသားစုလုံး ကောင်းကောင်း မွန်မွန် ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း နေနိုင်မဲ့ လှလှပပ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းလေးတစ်ခုကို ၀ယ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ.. တိုက်ခန်းကနေ မြစ်ပြင်ကျယ် ရှုခင်း တစ်ခုလုံးကို ဆီးပြီးမြင်နိုင်သလို ဇိမ်ခံပစ္စည်း အသုံးအဆောင်အားလုံး ပြည့်စုံအောင်လည်း ထည့်သွင်းထားနိုင်ခဲ့ပြီ..
အဲဒီ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းကို ပြောင်းရွေ့ပြီးတဲ့ ပထမဆုံးတနင်္ဂနွေနေ့မှာ အဖေဟာ မိသားစုကို ကြေငြာချက်တစ်ခု ထုတ်ပြန်ပါတယ်.. အဲဒါကတော့ သူဟာခုချိန်ကစပြီး သင်တန်းတစ်ခုခု တက်တာ၊ ဘွဲ့ထပ်ယူတာတွေ မလုပ်တော့မဲ့အကြောင်းနဲ့၊ အလုပ်မှာလဲ ရာထူးတွေ ထပ်တက်ဖို့ မျှော်လင့်တကြီး မထားတော့ဘဲ ကျွန်တော်တို့ အတွက် အချိန်များများပေးပြီး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ မိသားစုဖြစ်အောင် ကြိုးစားတော့မယ် ဆိုတဲ့စကား ဖြစ်ပါတယ်.. အဖေရဲ့ စကားကြားတော့ အမေအပါအ၀င် ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ၀မ်းပန်းတသာ ဖြစ်ကြရပါတယ်.. အဖေ့စကားနဲ့တင် မိသားစုတစ်ခုလုံး ဘယ်လောက်တောင် ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတယ် ဆိုတာ ပြောမပြတတ်အောင်ပါဘဲ..
ဒါပေမဲ့လို့ သိပ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာက ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ အဖေဟာ နောက်တစ်နေ့မနက် မိုးလင်းချိန်မှာတော့ အိပ်ပျော်နေရာကနေ ပြန်လည် နိုးမထခဲ့တော့ပါဘူး… ကျွန်တော်တို့ဘ၀မှာ အဖေနဲ့ ပျော်ပျော် ပါးပါး နေခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေဆိုတာ သိပ်နည်းခဲ့သလို နောက်ကိုလည်း ဘယ်တော့မှ ရှိလာနိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါ….
ကျွန်မတို့တွေရဲ့ ဘ၀မှာရော မိသားစုနဲ့ပျော်ပျော်ပါးပါး နေခွင့်ရခဲ့ကြပါရဲ့လား… လောက ဓမ္မတာအရ တစ်ခုလိုချင်ရင် တစ်ခုကို ပေးဆပ်ကြရသလိုပါဘဲ… အလုပ်နဲ့ ငွေကြေးကို ဦးစားပေးကြရင်း မိသားစုမေတ္တာနဲ့ ဝေးကွာခဲ့ ကြသူတွေ အများကြီးပါနော်.. ကျွန်မလဲ ပြန်စဉ်းစားရပါဦးမယ်.. ဘ၀မှာ မိသားစုနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး နွေးနွေးထွေးထွေး နေထိုင်မလား ငွေကြေးအတွက် အလုပ်ကို ဦးစားပေးပြီး မိသားစုမေတ္တာတွေ ခြုံလွှမ်းထားတဲ့ နွေးထွေး လုံခြုံတဲ့အိမ်နဲ့ ဝေးရာမှာ နေမလားဆိုတာကိုပေါ့.. အချိန်ဆိုတာ အစားထိုးလို့ မရသလို နောက်ပြန်ဆွဲလို့လဲ မရပါဘူး... အချိန်မနှောင်းခင်မှာတော့ တစ်ခုခုကို ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားရပါဦးမယ်... ခုချိန်မှာတော့ မိသားစုနဲ့ ဝေးတဲ့တစ်နေရာမှာ အလုပ်ကို ဦးစားပေးနေရဆဲပါ..
ပျော်ရွှင်သာယာ ချမ်းမြေ့သော မိသားစုဘ၀များကို လူတိုင်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်....
The academictips.org မှ Live and Work ကို ဘာသာပြန်ပါသည်။